Marwo Fowsiyo ?xubnaha joogtada ah ee QM waxaan u sheegnay in la taageero ciidankeenna? – Radio Daljir
Nofeembar 3, 2013 5:06 b 0
Muqdisho, November 3, 2013 – Wasiirka arrimaha debeda ee Soomaaliya marrow Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa dib ugu soo noqotay Soomaaliya, xili ay ka qayb-gashay shirkii looga hadlayey arrimaha ciidamada jooga Soomaaliya iyo horumarinta kuwa dowladda ee ka dhacay New York.
Marwo Fowsiyo oo shir jaraa?id ku qabatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaa ay sheegtay in ay saddex maalmood oo ay joogtay New York la kulantay madaxda dalal kala duwan iyo weliba xubnaha joogta ah ee Qaramada midoobey oo ay kala hadashay arrimaha ciidanka.
Wasiirka ayaa sheegtay in ay u sheegeen xubnaha ay la kulmeen in la taageero ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, si loo baacsado ururka Al-shabaab ee weli? jooga meelo ka mid ah deeganada dalka.
?xubnaha aan la shirnay waxaan in badan ka dhaadhicinay faa?idada ay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed u leedahay in la taageero ciidanka dalka.? Ra?isal wasaare ku xigeenka ayaa sidaas u sheegtay saxafiyiinta Muqdisho.
Magaalada New York ee dalka Maraykanka waxaa ku soo dhamaaday shir ay Qaramada midoobey ka yeesheen arrimaha ciidanka Soomaaliya iyo in taageero dheeraad ah loo fidiyo ciidanka AMISOM iyo kordhin-tooda.